Vay an-kandrina… | NewsMada
Mpangalatra dokotra, matin’ny fitsaram-bahoaka. Mpangalatra lavanila maitso, matin’ny fitsaram-bahoaka. Mpanao sinto-mahery, matin’ny fitsaram-bahoaka. Dahalo mpangalatra omby, matin’ny fitsaram-bahoaka. Mpangalatra vilany misy laoka nitaingina ambony fatana, matin’ny fitsaram-bahoaka. Mpamily fiarakodia nanao lozam-pifamoivoizana ka nitsoaka, matin’ny fitsaram-bahoaka. Raim-pianakaviana nanolana zaza tsy ampy taona, matin’ny fitsaram-bahoaka… Lava ny lisitra.
Tena mirongatra andro aman’alina ity resaka fitsaram-bahoaka ity. Tsy an-tsaha, tsy an-tanàna, tsy ambanivohitra, tsy an-tanàn-dehibe. Andrenesana tranga fitsaram-bahoaka hatrany saika isan’andro mihiratra. Fa inona loatra ny mahatonga izany? Dia sanatria ve ka ho fanontaniana tsy ahitam-bahaolana ? ”Tsy ny olana no olana fa ny tsy fahitana vahaolana”, hoy ny mpandinika fiarahamonina iray izay. Tsy misy àry ve ny finiavana hikaro-bahaolana ?
Misy milaza fa hoe ”taratry ny fanjakana tsy tan-dalàna” ny mahatonga io firongatry ny fitsaram-bahoaka io. ”Noho ny fahatrana”, hoy ny ankamaroan’ny olona. Ny hafa indray mamatratra ny rihatra any amin’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Tsy ananan’ny maro fitokisana noho ny kolikoly sy firaisana tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy izy ireny.
Misy koa mpitondra na manampahefana voalaza fa nahavita heloka kanefa toa afa-maina, na mahazo fahafahana. Ny loza aza, izy ireny indray no midingin-drambo avy eo ka mampihorohoro izay mianan-kendry manenjika na mitory azy. Miteny ny vola sy ny fahefana. Ireny ilay antsoina hoe ”dahalo ambony latabatra”, na ”tsimatimanota”.
Tsy hoe mety fa tena anisany mampirongatra ny fitsaram-bahoaka izany.
Fa na ahoana na ahoana, na ho an’iza na ho an’iza, heloka eo anatrehan’ny lalàna, eo anatrehan’Andriamanitra Andriananahary, ny mandatsaka aina, ain’olombelona. Herisetra izany. Ankoatra ny fitondram-panjakana, tompon’andraikitra voalohany, tsy afa-miala amin’ity ”vay an-kandrina, sady maharary no mahamenatra” ity ny tsirairay isam-batan’olona, ny fiarahamonim-pirenena. Mahatsapa izany koa ny fiangonana, ny FJKM, manao ho teny filamatra hanentanana ny kristianina amin’ity volana aogositra ity : ”Mitsangana hanohitra ny herisetra”.